ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ထိပ်တန်း5လူပျိုအမျိုးသားများအတွက်အမေရိကန်မြို့ကြီးများ
အားဖြင့် Nidhi Mathews
ထိပ်တန်း5လူပျိုအမျိုးသားများအတွက်အမေရိကန်မြို့ကြီးများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: စက်တင်ဘာ. 23 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
တစ်ခုတည်းယောက်ျားအခြားသူများထက်ပိုမိုအဆင်ပြေခံစားဘယ်မှာအချို့သောအမေရိကန်မြို့ကြီးများရှိပါတယ်. ဤဆွေးနွေးချက်ထိုကဲ့သို့သောမြို့ကြီးများစာရင်းတွင်ထိပ်ပေါ်မှာငါးနာမည်များအကြောင်းဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, သင်တစ်ဦးတည်းလူကိုမှန်လျှင်နှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရန်ရှာဖွေနေ, ဒီရေး-up ကိုဧကန်အမှန်သင်တို့အဘို့အသုံးဝင်သောဖတ်ဖြစ်လိမ့်မည်; နှင့်သင်ထိုမြို့တစုံတနေပြီဖြစ်ကြောင်းလျှင်, ကံကောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားပါ.
1. New York City,: ဤမြို့့နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးမြို့ပြဧရိယာမဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်လည်းကမ္ဘာမှာအများဆုံးအထင်ကရနေရာအရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်. ထိုမြို့သည်အဓိကအားဖြင့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း၏အတွက်လက်မထပ်ရသေးသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏အချိုးတစ်ခုတည်းအမျိုးသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအမေရိကန်မြို့ကြီးများ၏ဤစာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးမှ. တိုင်းများအတွက် 100 လက်မထပ်ရသေးသူယောက်ျား, မြို့ထဲမှာရှိတယ် 125 လက်မထပ်ရသေးသူအမျိုးသမီး; ဒါကြောင့်, နယူးယောက်စီးတီးရှိတစ်ခုတည်းတို့သည်အစဉ်ကမိတ်ဖက်ကောက်နေမှကြွလာသောအခါမှရွေးရန်ရှိနိုင်သည့်အတွက်ရွေးစရာအများကြီးရှိသည်.
မကြာခဏအဖြစ်ဖော်ပြ “အိပ်ဘူးသောမြို့”, နယူးယောက်စီးတီးအိမ်များကချိန်းတွေ့နေရာဒေသမှကြွလာသောအခါပင်မှရွေးရန်လုံလောက်သော options များ. သင်သည်ဗဟို Park မှာ Lounge တတ်နိုင်သမျှတစ်ခုသို့မဟုတ် posh ကလပ်မှာအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေညဦးယံအချိန်ဖြုန်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည် (ထိုမြို့ကိုသူတို့ထဲကအတော်လေးအနည်းငယ်ရှိပါတယ်).
2. Bismarck: အခြေချဖို့ကြိုးစားနေလူပျို, လူ Bismarck သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းစဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်, မြောက်ဒါကိုတာပြည်နယ်၏မြို့တော်. redundancy ကိုလက်ရှိတွင်၎င်း၏ခြုံငုံအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းတဝိုက် lurking နှင့်အတူအမေရိကရှိကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပေမယ့် 5.6 %, ဤမြို့မှာအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာသာဖြစ်ပါတယ် 2.8%.
ဖြည့်စွက်ကာ, ထွက်ဆွဲထားနှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းများအတွက်, မြို့တော်ကိုပူအစက်အပြောက်အရေအတွက်ရှိပါတယ်, ဆိုင်များကိုထည့်သွင်းသော, ညဥ့်အခါကလပ်အသင်းနှင့်စားသောက်ဆိုင်. Bismarck ရေတွင်ချိန်းတွေ့ခွင့်ပြု; သင်က McDowell ဆည်သဘာဝတရားက Park မှာလှေစီးပြီးအဘို့သင့်ချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်ယူနိုင်ပါသည်.
biking ချစ်သောသူအမျိုးသားများ, သို့သော်ငြားလည်း, အမစ်ဆိုရီမြစ်၏ဘဏ်တစ်လျှောက်လမ်းကြောင်း biking အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနိုင်ပါသည်.
3. ဝါရှင်တန် D.C.: အကယ်. သင်သည်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားတစ်ခုတည်းလူကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်, အမေရိကန်ကမြို့တော်ကိုသင်ပိုင်အရပ်ဖြစ်၏. ဒီမြို့သမိုင်းဝင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုအရေအတွက်ရတာဟာနှင့်တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးတစ်ခုတည်းယောက်ျားတာဟာနေရာဖြစ်ပါသည်.
သည့်အခါကဝါရှင်တန် D.C. အတွက်, သင်ကရက်စွဲအစက်အပြောက်ရှာနေချိန်တွင်ပင်ရွေးချယ်စရာ plethora ရရှိမည်. သင့်အနေဖြင့်ဒီရေမြစ်ဝှမ်းတစ်လှေစီးပြီးအဘို့အသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ယူနိုင်ပါသည်, အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တိရစ္ဆာန်ရုံဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်သမိုင်းဝင်, jazz နိုက်ကလပ်အဆိုပါ bohemian ခြေသလုံးအိမ်တိုင်မြေကြီးထဲမှာအဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ညဦးယံအချိန်ဖြုန်း. ယင်းတို့သည်သင်ရှိသည်အနည်းငယ်ရွေးချယ်မှုများဖြစ်ကြသည်; မြို့ထဲမှာသင်၌ရှိကြ၏တစ်ချိန်ကသင်ပိုမိုပဒေသာတွေ့လိမ့်မည်.
4. Philadelphia: ဤမြို့၏သမိုင်းဝင်အယူခံဝင်ကဒီ list ထဲမှာစတုတ္ထ Entrant ကို. တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးအချိုးဖို့အဆင်သင့်တစ်ခုတည်းယောက်ျားထိပ်၏ Philadelphia တစ်အောင်များအတွက်တာဝန်ရှိအခြားအချက်ဖြစ်တယ်5တစ်ခုတည်းယောက်ျားအဘို့မြို့တို့ကို.
Philadelphia တွင်ချိန်းတွေ့မယ့်ကြောင့်ဆိုသော် Fairmount Park ကကဲ့သို့ဆိုဒ်များမှာများစွာသောအတွေ့အကြုံ, အနုပညာ Philadelphia ပြတိုက်, ဒါကြောင့်အပေါ် Ortlieb ရဲ့ Jazzhaus နှင့်, မြို့ရဲ့ရာသီဥတုစတဲ့ dater ရဲ့ပရဒိသုအောင်အတွက်တာဝန်ရှိသည်. အားလုံးရက်အ Ph​​iladelphia တွင်နေသာသုံးရက်ဖြစ်၏.
5. မိုင်ယာမီ: ၏စပ်သဘာတစ်ခုတည်းအမျိုးသားတွေကနေအိမ်သို့တစ်ဦးမြို့ကြီးကို. ယောက်ျားမိုင်ယာမီဒီ list ၏နောက်ဆုံး Entrant ဖြစ်စေကြပြီနှစ်ခုအခြားအဓိကအကြောင်းရင်းများထက်ပိုမိုတစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးနေထိုင်မှုနှင့်ရောက်ရှိနေခြင်း၏အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်.
အဲဒီမြို့ငါးမြို့တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုတည်းယောက်ျားတစ်ဦးဖြစ်ပျက်ဘဝရှိသည်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟု. ဒါကြောင့်, သင်တို့ကိုပြောင်းရွှေ့နေရာချထားရန်ပိုနှစ်သက်သောတစုံတယောက်ကိုလုံးဝကိုသင်တက်င်.
ထိပ်တန်း5တစ်နေ့စွဲမှ Late ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ဆင်ခြေ
11 ခုနှစ်တွင်ချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်များအတွက်ထိပ်တန်းက Facebook စာမျက်နှာများ 2015
5 ကိုယ် Love စကားပြောရန်ကို Creative နည်းလမ်းများ